Kuyini ukuhlolwa kwe-TSH futhi imiphumela yakho isho ukuthini? - Imfundo Yezempilo | Julayi 2021
Imininingwane Yezidakamizwa Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Cindezela Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Izilwane Ezifuywayo Inkampani Umphakathi, Inkampani Izindaba Izidakamizwa Vs. Umngani Ukuphuma Umphakathi, Ukuphila Kahle Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Inkampani, The Checkout Inkampani, Imfundo Yezempilo Ukuphila Kahle
Main >> Imfundo Yezempilo >> Kuyini ukuhlolwa kwe-TSH futhi imiphumela yakho isho ukuthini?
Kuyini ukuhlolwa kwe-TSH futhi imiphumela yakho isho ukuthini?
Isivivinyo se-thyroid-stimulating hormone (TSH) sihlola ukusebenza kwe-thyroid namazinga e-hormone yegilo. Ikhiqizwa yi-pituitary gland, etshela i-thyroid yakho, etholakala engxenyeni engezansi entanyeni yakho, ukwenza nokukhulula ama-hormone alawula ukushisa komzimba wethu, imetabolism, nokugcina ubuchopho, izinhliziyo, nezinye izitho zethu zisebenza kahle.
I-American Thyroid Association (ATA) incoma ukuthi abantu abadala baqale ukuhlolwa kwe-TSH beneminyaka engama-35 bese bephinda izivivinyo njalo eminyakeni emihlanu uma imiphumela isezingeni elijwayelekile. Udokotela wakho angaphinde ahlele ukuhlolwa kwe-TSH uma uhlangabezana nezimpawu ze-thyroid engasebenzi noma engasebenzi ngokweqile. Izimpawu ze-hypothyroidism (i-thyroid engasebenzi) zingafaka ukukhathala, inkungu yobuchopho, isikhumba esomile ngokweqile, ukulahleka kwezinwele nokuzizwa kubanda. Izimpawu ye-hyperthyroidism (i-thyroid engasebenzi ngokweqile) ingafaka ukujuluka, ukushaya kwenhliziyo okusheshayo, ubuthakathaka bemisipha, ukukhathazeka nokucasula. Kunoma ikuphi, wena — noma umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo — ungathola ukuthi igilo lakho likhulisiwe, elibizwa ngokuthi i-goiter, noma amaqhubu egilo, okuyizigaxa ezincane endlaleni yegilo.
Ngabe ukuhlolwa kwe-TSH kufaka ini?
Ukuhlolwa kwegazi kwe-TSH kuvame ukwenziwa njengengxenye yephaneli lokuhlolwa kwegazi ngokuhlangana nokuhlolwa kwempilo minyaka yonke. Ukuhlolwa kunquma ukuthi i-thyroid yakho isebenza kahle kangakanani ngokulinganisa inani le-hormone evuselela i-thyroid egazini lakho. Ukuhlolwa kwegazi okungazili ukudla, okusho ukuthi awudingi ukwenza noma yini ekhethekile ukulungiselela.
Odokotela kufanele bathathe isampula yegazi le-TSH ezigulini ze-thyroid njalo emavikini amane kuya kwayisishiyagalombili ngemuva kokutholakala kwabo kokuqala. I- bona uncoma ukuhlolwa kwe-TSH njalo ezinyangeni eziyisithupha kuya kwezingu-12 ngenkathi usemuthini ozinzile wemithi futhi kaningi uma umthamo wakho ushintshile.
Kufanele libe yini izinga lakho le-TSH?
Amalabhorethri amaningi ahlukanisa amazinga ejwayelekile e-TSH njengaphakathi kuka-0.4 no-4.5 milliunits ngelitha ngalinye (mU / L), ngokusho kwe I-American Thyroid Association (ATA). Izinga elijwayelekile le-TSH ezimweni eziningi, livame ukukhombisa ukuthi awunayo inkinga ye-thyroid.
I- bona ibika ukuthi abantu baseMelika abacishe babe yizigidi ezingama-20 banohlobo oluthile lwesifo segilo. Kodwa ngaphezu kuka-60% walabo abanesifo se-thyroid abasazi ngesimo sabo sezokwelapha.
Kusho ukuthini uma i-TSH yakho iphansi?
Ezimweni eziningi, amazinga we-TSH angaphansi kuka-0.4 mU / L akhombisa i-hyperthyroidism, eyaziwa nangokuthi i-thyroid engasebenzi, okusho ukuthi, umzimba wakho ukhiqiza i-hormone yegilo eningi kakhulu. Isifo seGraves yisifo sokuzilimaza komzimba kwesinye isikhathi esidala i-hyperthyroidism.
Kwenzekani lapho i-TSH yakho iphakeme?
Ngokuvamile, amazinga e-TSH aphezulu kuno-4.5 mU / L akhombisa i-hypothyroidism, noma i-thyroid engasebenzi, okusho ukuthi umzimba wakho awenzi i-hormone yegilo eyanele. I-Hashimoto's thyroiditis yisifo sokuzilimaza kwesinye isikhathi esidala i-hypothyroidism.
Ngabe usengaba nenkinga uma i-TSH yakho ingejwayelekile?
Ukuhlolwa kwe-TSH kuyinkomba ebucayi kakhulu yempilo yakho yonke yegilo, kusho uBrittany Henderson, MD, i-endocrinologist eqinisekisiwe ebhodini Isikhungo Se-Thyroid SaseCharleston eMount Pleasant, eSouth Carolina . Ukuhumusha kungaba nzima ngoba kunezinhlobonhlobo 'zokujwayelekile' esikalini se-TSH.
Imithi nezithasiselo ozithathayo njengamanje zingathinta imiphumela yokuhlolwa kwakho kwe-TSH. Isibonelo esisodwa yi-biotin, engakhombisa ngamanga amazinga aphansi we-TSH.
Okuthathwa njengokujwayelekile kuthonywe izinto eziningana:
Ucwaningo kukhombisile ukuthi amazinga we-TSH athambekele ekukhuleni ngeminyaka, anciphe ngokukhulelwa, futhi ayahluka ngokobuhlanga.
Eyodwa funda ithole ukuthi iziguli ezingama-97.5% ezineminyaka engama-55 ubudala zinamanani we-TSH angaphansi kuka-4.0 mU / L. Ngaphezulu kwaleyo minyaka inani eliphakeme le-97.5th percentile lakhuphuka kancane kancane, lafinyelela cishe ku-4.75 mU / L phakathi kweminyaka engama-75 nengama-85 kanye no-5.0 mU / L ezigulini eziphakathi kweminyaka engama-85 nengama-90. Abantu abadala abadingi ukwelashwa.
Amazinga e-TSH nawo angahluka ezinganeni futhi ibanga lingashintsha ngokuya ngeminyaka. Kunconywa ukuthi abazali bahlole udokotela we-endocrinologist ukuthola ukuthi ngabe uhla lwe-TSH olungcono yini lwezingane zabo.
Kwabesifazane abakhulelwe ku-trimester yabo yokuqala, i-American Thyroid Association incoma ukuthi amazinga e-TSH agcinwe ngokuya ngesimo se-thyroid autoimmunity. Imvamisa, i-TSH igcinwa phakathi kuka-0.2-<2.5 mU/L or the upper limit of TSH ie, 4.5 mU/L based on autoimmunity. TSH is recommended to be maintained between 0.3-3 mU/L in the remaining trimesters.
UDkt Henderson, owabhala ngokubambisana le ncwadi, Okufanele Ukwazi Ngezifo zikaHashimoto , uphawula ukuthi imiphumela ye-TSH nayo ingahluka ngokuya ngobuhlanga. Izinga le-TSH ngokwesiko liphakeme kubantu abamhlophe, liphansi kubantu abamnyama, futhi kwenye indawo liphakathi kwabantu baseSpain, uyachaza.
Uthi iziguli zingaba nemiphumela ye-TSH ebangeni 'elijwayelekile', ngenkathi zisahlangabezana nezimpawu ezisebenzayo (njengokunciphisa isisindo noma ukuzuza, ukulahleka kwezinwele, ukukhathala, ukukhathazeka nokuningi). Amazinga e-TSH akhombisa ukuthi ngabe i-thyroid yakho inenkinga, kodwa ayikhombisi ukuthi yini ebangela inkinga. Ukuthola lokho, umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo anga-oda izivivinyo ezengeziwe.
Lapho ungahle udinge ukuhlolwa okwengeziwe
Kulezi zimo, odokotela bangakhetha uku-oda iphaneli ephelele yokuhlolwa kokusebenza kwe-thyroid ukukala i-thyroxine efana ne-Free T4, Total T4, Total T3, kanye namasosha omzimba wegilo, ngaphezu kwe-TSH. Ingxenye ebucayi yokuthola imiphumela engcono kakhulu yokuhlolwa kwe-TSH nokwelashwa kwe-thyroid kubandakanya ukuqinisekisa ukuthi uthola izivivinyo ezifanele zokuxilonga.
I-Free T4 ukuhlolwa kwegazi okungazili ukudla okulinganisa amazinga we-T4, i-hormone yegilo. Izinga elijwayelekile lamabanga we-Free T4 phakathi0.8 kuya ku-1.5ama-microgram nge-decilita ngayinye (ng / dL). Ingahluka ngokuya ngesilingo se-laboratory esisetshenzisiwe. Ingqikithi ye-T4 ayenziwa ngokujwayelekile ngaphandle kokukhulelwa lapho inembe kakhudlwana kunokuhlolwa kwe-Free T4.Ububanzi obujwayelekile be-T4 bungu-5-12 ug / dl. Amazinga aphansi ka-T4 zibonwa nge-hypothyroidism, kuyilapho amazinga aphezulu ebonakala nge-hyperthyroidism.
Ukuhlolwa kwegazi okungazili ukudla okungu-Total T3 kwesinye isikhathi kunconywa njengendlela yokuxilonga i-hyperthyroidism nokunquma ubukhulu besifo. Imiphumela ejwayelekile ye-T3 ilinganiselwa kusuka kuma-nanograms ayi-100 kuye kwangama-200 nge-deciliter ngayinye (ng / dl). Ukuhlolwa kwamahhala kwe-T3 akunconyiwe ngenxa yokuguquguquka kwesilingo sayo se-laboratory. Ukubuyela emuva kwe-T3 kunendima elinganiselwe ekutholeni izinkinga ze-thyroid futhi akukhuthazwa njalo.
Udinga nini ukwelashwa?
Iziguli eziningi ze-hypothyroid zizizwa zizinhle kakhulu lapho zisebenzisa imishanguzo futhi amazinga azo e-thyroid asezingeni ‘elilungile’ le-TSH elingu-0.5-2.00 (elinesikali sebhu esingu-0.45-4.5), kusho uDkt Henderson. Njengoba ukuhlolwa kwelebhu nobubanzi kuyahluka, amazinga alungiselelwe elebhu ethile yesiguli nawo angahluka. Ezigulini esezikhulile, inhloso ye-TSH ikubanga le-4.0 - 6.0.
Ingabe i-diphenhydramine hcl iyafana ne-benadryl?
Odokotela abaningi bavame ukuphatha iziguli zabo ze-hypothyroid ngomthamo wansuku zonke we-levothyroxine, uhlobo olwenziwe ngumuntu lwe-T4 hormone ye-thyroid eyenziwe ngumzimba, abanye odokotela batusa ukusebenzisa i-T4 ne-T3 njengendlela yokwelashwa.
OKUSHIWO: Izinto ezinhlanu ezingadida ngemithi yakho yegilo
Ngemithi ye-thyroid, i-dosing kufanele ilunge kahle, kusho uDkt Henderson. Umuthi omningi kakhulu noma omncane ungaholela emiphumeleni emibi ethinta impilo yesiguli.
Ezigulini ezingama- sitholwe njenge-hyperthyroid, Ukwelashwa kungafaka imithi ye-antithyroid efana ne-methimazole, esebenza ukulawula i-thyroid engasebenzi. Ezinye iziguli zinikezwa iodine enemisebe, enikezwa ifomu lamaphilisi ukuze inciphise i-thyroid kancane kancane futhi ngokuphepha.
Uma uhlangabezana nezimpawu ze-thyroid engasebenzi noma engasebenzi ngokweqile, funa izeluleko zochwepheshe bezokwelapha kudokotela wakho noma uchwepheshe we-endocrinology ngalezi zivivinyo nezindlela zokwelashwa.
Imiphumela emibi ye-Minoxidil nokuthi ungayibalekela kanjani
Okudingayo ukwazi ngesifo samehlo sikashukela
izindleko zokulawulwa kokuzalwa ngaphandle komshwalense
ukwelashwa kwemvelo kokutheleleka ngemvubelo ngesikhathi sokukhulelwa
i-advil, i-nuprin, ne-motrin ngamagama ohlobo lomkhiqizo (wokuhweba) wemithi ejwayelekile:
ungakhuphuka nge-nabumetone 500 mg
siyini isithako esisebenzayo ku-prevacid
uyini umehluko phakathi kwesikhangiso se-imodium ne-imodium
mangakanani i-melatonin okufanele ngiyithathe ebusuku